Indlela yokusebenzisa isibani se-aroma ngekhandlela ngamafutha? Indlela yokusebenzisa isibani se-aroma kagesi?
Indlela yokusebenzisa isibani se-aroma?
Izici zokusebenzisa isibani se-aroma ngekhandlela nasegesi.
Izwe lanamuhla ligcina umuntu enkingeni eqinile kakhulu futhi wonke umuntu ufuna izindlela ezifanele zokuphumula. Abanye basebenzisa i-aromatherapy ngenkuthalo, ngoba ilula futhi iyatholakala kuwo wonke umuntu. Le nqubo ayidingi imishini ekhethekile ngaphandle kwebani elimnandi namafutha abalulekile.
Uma ufuna ukuzama ukudala umkhathi okhethekile ozungezile, finyelela ezweni lephunga futhi uncike empilweni yabo yokuphumula - i-aromatherapy yilokho okudingayo. Kuyiqiniso ukuthi konke kwahamba kahle, kufanele ufunde ukuthi ungasebenzisa kanjani isibani se-aroma ngokufanele. Imakethe manje inikeza inombolo enkulu yeziqukathi ezihlukene zokunambitheka. Ungasebenzisa isibani se-ceramic yendabuko noma unikeze okuthandayo kumamodeli amasha kagesi. Sizokhuluma ngezinselele zomuntu ngamunye.
Isibani se-aroma sisebenza kanjani?
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda ukuthi isibani se-aroma yisitsha esivamile, lapho amafutha abalulekile azophuma khona. Lona idivayisi elula kakhulu, evame ukuqukethe isitsha encane nendawo yokushisa. Ngaphambi kwalokho zenziwe izitshalo zokwakheka kuphela futhi zithathwa njengokusetshenziswa komlilo ovulekile; manje kungenzeka ukuhlangabezana nezinye izinhlobonhlobo, nakuba isimiso sokusebenza asishintshi kulokhu.
Ukuze uphuthukise amafutha abalulekile, udinga ukuthululela amaconsi ambalwa esitsheni, ngaphambilini agcwaliswe ngamanzi. Emva kwalokhu, thatha ikhandlela, ulikhanyise bese ulibeka ngaphansi kwesitsha ukuze umlilo uphese uketshezi.
Ungalokothi ushiye isibani sephunga elingalondoloziwe ngaphandle kokuthi ukhanyise ikhandlela. Qinisekisa ukuyihlanza njalo emva kokusetshenziswa, ikakhulukazi uma uhlela ukusebenzisa amanye amafutha.
Uma uqala ukubuyela ku-aromatherapy, ungaqhubeki inqubo engaphezu kwesigamu sehora. Esikhathini esizayo, ungakwazi ukugcwalisa igumbi isikhathi eside, kepha ungapheli amahora amabili.
Isibani se-aroma kagesi sisebenza kanjani?
Isimiso sokusebenza sifana, umehluko kuphela ukuthi ukushisa akuveli ebhandlela, kodwa kuphuma ugesi. Zingaba ngezindlela ezifani kakhulu, isibonelo, ngesimo se-saucer. Kuwanele ukuthululela amanzi kuwo ngamafutha abalulekile bese uyifaka ngaphakathi. Kunezinketho ezibukeka njengendandatho. Kumele igqoke ku-isibani esilula esitheni esivamile setafula. Kukhona ngisho nama-usb-izibani ze-aroma ongazithwala nawe kanye ne-laptop yakho. Kwanele ukuyixhuma kudivayisi futhi ungajabulela amaphunga amnandi.
Amafutha anamakha anemiphumela ehlukile emzimbeni womuntu, ngakho-ke kudingeka ukhethe ngokucophelela. Ngaphezu kwalokho, kunemithetho embalwa yokusebenzisa i-aromalamps, esizokwabelana ngayo.
Ngaphambi kokusebenzisa isibani sephunga, ventilate ekamelweni kahle.
Qinisekisa ukuthi ayikho amawindi okuvula futhi avulekile ekamelweni.
Buka lapho ubeka khona isibani sephunga. Ungayikhanyisi endaweni eplastiki.
Uma indlu inezingane, qiniseka ukuthi abakwazi ukuyifinyelela.
Khetha ngokucophelela amafutha omnandi. Uma ungahlali wodwa, thatha isithakazelo enhlalakahleni yabanye ngoba kungenzeka ukuthi akufanelekile.
Ngimaphi amafutha anamakha okufanele ngiwasebenzise?
Isayensi yephunga isisekelo futhi akuwona wonke umuntu okwazi ukuyiqonda ngokugcwele. Kodwa-ke, kunezincomo eziningana ezijwayelekile ezizokusiza ukhethe amafutha abalulekile futhi uthole umphumela omkhulu kuwo.
Ukuze ujabule, sebenzisa ama-aromas e-bergamot, i-lemon, i-mint noma i-rosemary.
Ukuphumula kuzosiza ama-mandarin, i-lavender, i-marjoram noma i-lemon balm. Ungasusa ukucasuka ngamafutha we-sandalwood noma i-geranium.
Ukubulala ama-bacteria okuvusa amakhaza, sebenzisa amafutha wetiyi, i-thyme, i-eucalyptus.
Ukwakha isimo sengqondo, njenge-aphrodisiac, sebenzisa i-pink, i-lavender, i-cedar oil.
Uma unekhanda, shayela i-rosemary amafutha noma i-chamomile ibe isibani esiphunga.
Jabulela futhi ube nempilo!
"I-Australia" noNicole Kidman bahlehlisiwe
Indlela yokuhlela iholidi lomndeni
Indlela yokwenza ikhekhe lamathawula
Kuyini imfashini yokugqoka lo ubusika
Indlela yokuhlala unempilo futhi uhambisane nemithetho engama-35: 5 ebalulekile
Yini ebangela ukukhwehlela ezinja?
Ungazibikezela kanjani isimo sezulu sengqondo emndenini?
Inyoka yokubheja: zokupheka
Isipho esingcono kakhulu somuntu othandekayo
Prince William no Kate Middleton
Ubulili obungavamile - ukudluliswa kwanoma yiluphi ubudlelwane
Amakilasi okulahlekelwa isisindo ngokushesha
Ama-apula abikwa ngotshisi we-cottage